नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रवीन्द्र मिश्र, अनैतिक भिड र वास्तविकता : विवेकशील साझा पार्टी भित्र विवेक भएका यदि कोही हुनुहुन्छ भने... !
केही गर्छु देशको लागि भन्ने रवीन्द्र मिश्र हरूलाई हराउँदै खुसी मनाउनु अनैतिक भिडलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भन्ने लाग्छ मलाई । देशको लागि केही गर्छु भनेर यसरी समर्पित हुने रबीन्द्रहरु र तिनका पार्टी हार्दै जानु, अपराध र आतङ्कका मतियारहरू जित्दै जानु लाई मैले कुनै हालतमा पनि राम्रो भयो भन्न सक्दिन । यसरी रवीन्द्र मिश्रहरूलाई एक्लाउँदै जाने हो भने भोलि आउँछ को ? कस्तो नजिर बस्छ ? छातीमा हात राखेर सोच्न म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
विवेकशील साझा पार्टी भित्र विवेक भएका यदि कोही हुनुहुन्छ भने रवीन्द्रको राजीनामा फिर्ता गराएर रवीन्द्रलाई फर्काउनुहोस् ।
मलाई थाहा छ - अनैतिकहरूको भिड र जमातले अब रवीन्द्र मिश्रको खोइरो खन्न सुरु गर्ने छन् तर म भन्छु - रवीन्द्र मिश्र तिम्रा देऊ "बा", बाल्कोटे "बा", अपमान "बा" र अपराध र आतङ्कका "बा" हरू भन्दा हजार गुणा ठिक छन् । यिनले राष्ट्र लुटेका छैनन्, जनता लुटेर राक्षसी र भ्रस्ट राज चलाएका छैनन् । सुन्दा तितो लाग्ला, तर सत्य यही हो । बुझे भईगो ।
रबीन्द्रजी, तपाईं राजनीतिमा न आउनु थियो आउनु भयो तर अब अलग हुने तपाईंलाई छुट छँदै छैन । कत्ति पनि निराश नहुनु होला । तपाईंलाई एक दिन जनताले चिन्ने छन ढिलो होला तर अबस्य चिन्ने छन । धन्यवाद ।
रबीन्द्र मिश्रको राजीनामा यसरी आयो आज !